Search Term: နေစိုးထက် , 37 results have been searched, Search time: 0.011 seconds , Sorting Option: Match level Published Date Subject Title Author Call No. Borrowed Times Renewal Times Volume No. Sort by: Desc Asc Hide Navigation | Hide trend diagram
NL Yangon (5)
ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်များ-အတ္ထုပ္ပတ္တိ၊ မြန်မာနိုင်ငံ၊ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်း၊ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစန်းယု၊ နိုင်ငံရေးနှင့်အစိုးရ၊ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးသူရတင်ဦး၊ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးသူရကျော်ထင်၊ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ၅၀၀၊ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးစောမောင်၊ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ၊ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင် (1)
ထင်​ကျော် ၊ ဦး (1)
နိုင်ငံရေးပုဂ္ဂိုလ်များ- အတ္ထုပ္ပတ္တိ (1)
မင်းအောင်လှိုင် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် (1)
မဟာသီယာမိုဟာမက်; မလေးရှားနိုင်ငံ-နိုင်ငံရေးနှင့်အစိုးရ (1)
မြန်မာနိုင်ငံ - သမိုင်း (1)
မြန်မာနိုင်ငံ- နိုင်ငံရေးနှင့်အစိုးရ; မြန်မာနိုင်ငံ- သမိုင်း (1)
မြန်မာနိုင်ငံ- သမိုင်း (1)
မြန်မာနိုင်ငံ- သမိုင်း; မင်းတုန်းမင်း; နန်းတွင်းအရေးတော်ပုံ; မြန်မာနိုင်ငံ- နိုင်ငံရေးနှင့်အစိုးရ (1)
မြန်မာနိုင်ငံ- သမိုင်း; ရခိုင်အရေးအခင်း (1)
မြန်မာနိုင်ငံ-နိုင်ငံရေးနှင့်အစိုးရ ; ရခိုင်ပြည်နဘ်အရေးအခင်း ;အကြမ်းဖက်မှု-မြန်မာနိုင်ငံ (1)
မြန်မာနိုင်ငံ-သမိုင်း ; ရခိုင်ပြည်အရေး (1)
More than 180 days (32)
Not In Library (5)
ရာဗိန္ဒြာနတ်တဂိုး: ၂၁ရာစု၏ဂန္ထဝင်လူသား Ordering
Publisher: ဇော်မိုးချစ်စာပေ Published Date: 2019
Literature Type: Books , Call No.: 928 နေ ၂၀၁၉/၁၃၀၄
Publisher: ခိုင်ဇင်စိုးစာပေ Published Date: 2017
Literature Type: Books , Call No.: ၃၆၂.၂၉၃ နေ ၂၀၁၈/၃၉၉၁
Publisher: လင်းလင်းစာပေ Published Date: 2017
Literature Type: Books , Call No.: ၈၉၅.၈၃ နေ ၂၀၁၇/၁၆၄၈
Publisher: ဇင်ရတနာစောစာပေ Published Date: 2011
Literature Type: Books , Call No.: ၉၅၉.၁ နေ ၂၀၁၁/၂၀၂၁
Publisher: ပန်းဝေဝေစာပေ Published Date: 2011
Literature Type: Books , Call No.: ၃၀၀ နေ ၂၀၁၁/၁၉၈၈
Publisher: ချိုတေးသံစာပေ Published Date: 2011
Literature Type: Books , Call No.: ၉၂၃.၁ နေ ၂၀၁၁/၁၇၆၅
Publisher: လင်းလင်းစာပေ Published Date: 2010
Literature Type: Books , Call No.: ၉၀၀ နေ ၂၀၁၀/၄၃၃၈
ကမ္ဘာ့နိုင်ငံရေးဇာတ်ခုံမှအထင်ကရခေါင်းဆောင်များ ၂ Ordering
Publisher: ဇင်ရတနာစောစာပေ Published Date: 2010
Literature Type: Books , Call No.: ၉၀၀ နေ ၂၀၁၀/၃၇၉၆
Publisher: ဇင်ရတနာစာပေ Published Date: 2009
Literature Type: Books , Call No.: 900 နေ ၂၀၀၉/၃၇၅၅
ဝိညာဉ်လောကဖြစ်ရပ်ဆန်းဝတ္ထုတိုများ: မြင်းထိန်းကျော်ရဲ့ချစ်သူ Ordering
Publisher: ရင်သွေးငယ်စာပေ Published Date: 2009
Literature Type: Books , Call No.: ၈၉၅.၈၃ ဝိ ၂၀၀၉/၅၉၆